IsumaTV: Miaro Ny Median-janatany Ary Mampifandray Ireo Vondrom-piarahamonina Teratany · Global Voices teny Malagasy
IsumaTV: Miaro Ny Median-janatany Ary Mampifandray Ireo Vondrom-piarahamonina Teratany
Voadika ny 09 Avrily 2012 23:15 GMT
Talohan'ny vanim-potoanan'ny fampitam-baovaon'olotsotra, sarotra dia sarotra ny nahita ireo horonantsarin-janatany sady lafo be ho an'ireo mpamokatra horonantsary ny mamokatra azy sy mizara azy ireny. Nefa ankehitriny manamora ny fanatontosan'ny ao an-toerana sy mampihena ny vola lany ny fampiasàna fitaovana fifampitam-baovaon'olotsotra samihafa sy ny sehatra isankarazany, tsy mandany hery sy azon'ireo kely fampiasam-bola hanatontosana fandaharana ny famoahana azy an'aterineto.
Vavahadin'ny Aterineto amin'ny lahatsary iray malaza ny Isuma.tv avy any Kanada, izay vohikalana tambajotra sosialy tsy miankina an'ny Inuit ary sy ireo horonantsarin'ny zanatany navoaka tamin'ny Janoary 2008 ny lahatsary mikasika ny Aboriginal [vazimba astralianina] . Mampiantrano horonantsary maimaipoana io vohikala io ary mikasa ny hanamora ny fifandraisan'ireo vondrom-piarahamonina Teratany manerana izao tontolo izao. Ny andraikitry ny orinasa famokarana mpiantoka azy, Igloolik Isuma dia ny milaza ireo tantara tena izy momba ny Inuit ho an'ireo vahoaka mpijery Inuit na tsia manerana izao tontolo izao avy amin'ny alalan'ny famokarana media mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina tsy miankina sy mba ahafahana mitahiry sy manamafy ny kolontsaina sy ny teny Inuit.
Manome fahafahana ny mponin'ny Zanatany haneho ny zavamisy amin'ny feony manokana ireo fitaovan'ny IsumaTV. Mampiasa teknolojiam-pifandraisana vaovao izy mba hananganana foibem-pifandraisana sy fifanankalozana anivon'ny vahoaka Teratany sy tsy Teratany manerana izao tontolo izao.
Manoratra i Teague Schneiter ao amin'ny Hub (Vavolombelona):
Amin'ny mahasehatra “mifototra amin'ny hetsika” izay manome fahafahana ireo mpampiasa hirotsaka sy “handray anjara anatina fizotran'ny fiovana” azy, ny IsumaTV dia karazana sehatra iray izay tsy vaovao amintsika ato anatin'ny Hub. Lasa sehatra fandraisan'anjara, fiaraha-miasa sy fanehoana ny fahafanam-po ho an'ny Inuit sy ireo vondrom-piarahamonin-janatany sy ireo fikambanana izany, ary samy ahitam-bokany na ao an-toerana na iraisam-pirenena. Mikatsaka ny hampiàsa “ny herin'ny hafainganan'ny Aterineto” izy io mba hanatsaràna ny fifandraisana sy ny fifanakalozana ao anivon'ny/manoloana ny vahoaka zanatany na tsia avy amin'ny alalan'ny famporisihana ny famoronana zavatra iray izay manasongadina ireo feon'ny teratany. Mamorona fahafahana izy, tsy amin'ny fakàna, fitahirizana ary fampisehoana ny zava-bita fotsiny ihany, fa amin'ny fizaràna sy famoronana fianakaviambe mihetsiketsika anatin'ny mahakasika ny fahalàlan'ny zanatany, ireo teny, traikefa, hevitra, ary ireo fomba fiaina. Tsy vitan'ny hoe vohikala mifototra amin'ny median-teratany miaraka aminà fahafahana hizara fotsiny ihany izy, fa lasa mirotsaka matetika anatin'ireo fanentanana, tetikasa ary hetsika ihany koa izy mba hampahiràtana ny mason'ny olona amin'ny zavatra iainan'ny Zanatany.
Miisa maherin'ny 2600 ireo lahatsary avy amina tenin-janatany 46 samihafa voatahiry ao amin'io sehatra io. Mitahiry ireo rakitry ny media Inuit sy ny Aboriginal Aostraliana izay ahiana ho very io tetikasa mandrakitra an-tahiry nomerika ireo Vakoky ny Inuit sy ny Zanatany Aostraliana (DIAMA) io. Manadio, mikosoka indray mandeha koa, mandrakitra ho tahiry nomerika ary mamoaka ireo fitaovana fandraisam-peo sy sary voahangona hatramin'ny vanim-potoana 1970 ny IsumaTV.
Azo jerena io vohikala io na amina tosaka avo na ambany ho an'ireo vondrom-piarahamanonina any ambanivohitra. Tetikasa mpampiditra fomba vaovao iray mampiasa ny fitaovam-pifandraisana 2.0 mba hanandratana ny teny, hamelomana ny kolontsaina, hampandraisana andraikitra ny tanora ary hamonjena aina any amin'ny Inuiot an'i Kanada sy ireo vondrom-piarahamonina teratany kosa ny NITV (Tambajotra Fifandraisana Avaratra) ao amin'ny IsumaTV.
Ny “Show Me On The Map: Discussions on Mining on Aboriginal Lands” dia bilaogy ao amin'ny aterineto izay miresadresaka mikasika ireo olana ara-sosialy, ara-toekarena, ary ara-tontolo iainana manoididina ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany any Kanada Arktika. Tsidiho ny http://www.isuma.tv/hi/en/showmeonthemap raha te-hihaino ny ahiahin'ireo mipetraka eny amin'ireny vondrom-piarahamonina mifandray amin'ireo tetikasana fitrandrahana hoavy ireny.
Araho ao amin'ny Facebook, Twitter, Myspace ary Youtube ny Isuma TV ho an'ireo vaovao farany.